Matte Black Centerset Bathroom Igwe mmiri
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW Matte Black Bathroom Foset 4 Inch Centerset
gosiri 4.93 nke 5 dabeere na 28 ahịa Fim
(28 ahịa reviews)
wowowfaucet na-agba mbọ ịnye ngwaahịa dị elu ma dị ọnụ ahịa. Igwe mmiri ịsa ahụ ọgbara ọhụrụ na-abịa na ntuziaka nwụnye ọkachamara. Echichi dị mfe ma dị mfe ịwụnye.
Ntụziaka nwụnye 2321200B
WOWOW athlọ ịwụ ahụ na-acha uhie uhie na-acha ọcha 2321200B nke a họọrọ nke ọma, ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ, ọgụgụ isi, nkenke nrụpụta, uru zuru oke maka ego. a na-eziga nchịkọta niile site na UPS ma ọ bụ USPS akụ na ụba ma ọ bụ ọrụ ọkọlọtọ, yana akwụkwọ ikike afọ atọ, ma hazie n'ime 1 ụbọchị ọrụ iji hụ na nnyefe ọsọ ọsọ!
2 Aka Bathroom foset: kpochapụwo 2 njikwa imewe maka kpọmkwem mmiri & okpomọkụ akara, 4-anụ ọhịa ahụ size na 3-oghere kwesịrị ekwesị n'ihi na ọtụtụ efere na sinks; Onwem na mbuli Rod Drain Assembly; Ahịa Ahịa A Na-ere Iche iche
2 HANDLES FAUCET BATHROOM: Ọkụ na mmiri oyi: Kupọnsịl igwe anaghị akwụ ụgwọ, kpụrụ akpụ seramiiki dị elu, na-agbagharị iji wee hụ na ogologo oge iji na-agbanyeghị mmiri na mgbapụta mmiri, wee na-achịkwa oke mmiri.
Ogo na akụrụngwa: akpụrụ akpụ NSF nwere akara na-enweghị mmiri na-enweghị mgbaze, a na-ekwe nkwa ọkọlọtọ mmiri; Ihe: zinc alloy / igwe anaghị agba nchara / igwe
BASIN FAUCET HALALAL ABS: Onye na-akwado ABS na-azoputa mmiri 50% na mgbochi. Katiriiki na-anaghị akwụwa ụgwọ seramiiki na-adịte aka. Faucet dị mma nke nwere ụkwụ ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara, akwa ike.
AKWANKWỌ AKW VKWỌ WITHB WARR WITH EGO NA-EGO 3BỌCH XNUMX XNUMX: Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla. Anyị ga-edozi nsogbu gị ozugbo enwere ike.
SKU: 2321200B Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: 2 Aka, Ogwe 3, Black
Ihe nchara nchara / Black
Zinc alloy / Igwe anaghị agba nchara
Ahụrụ m ọkpọ ndị a n'anya! Ha dị ọnụ ala karịa Lowe's na Home Depot ma ha mara ezigbo mma. Mmetụta mmiri dị mma kwa.
ọmarịcha stọsi ike. Anyị nwere otu ihe dị ka otu afọ. Anyị na-ewu ugbu a ma zụta abụọ ọzọ maka ụlọ anyị.
O *** r2020-03-05
Ka na-arụ ọrụ nke ukwuu otu afọ mgbe echichi. Ojiji kwa ụbọchị, na-enweghị ihe ịrịba ama nke leakage.
M *** d2020-03-09
Ezigbo ihe dị mma. EIt mara mma na ime ụlọ ịwụ m na ụlọ ahịa ndị ọzọ ego m ga-azụta ọzọ maka ụlọ m ọzọ ọ na-abịa na ihe niile Push button iji kwụsị mmiri si imi ochie otu nwere na
asy iji wụnye.
N'anya a foset na akụkụ kasị mma bụ mmapụta elu igbapu mmiri, nnọọ mfe ka inThis foset ese akwa m na ime ụlọ ịwụ na ọ na-arụ ọrụ great.stall na dị nnọọ jụụ mma.
Ezi ihe onwunwe na ọnụahịa nwere ezi uche, m ga-akwado ngwaahịa a ụlọ ịsa ahụ ịsa ahụ
O zuru oke. Uru dị ukwuu, ọ dịghị mkpa iji ego nzuzu na-ebusa n'ụlọ. Nke a mara ezigbo mma, nke oge a ma dịkwa mfe iji. Ahụrụ m ya n'anya, na-eme ka ụlọ ịsa ahụ m mara mma.
Ọ na-amasị m ka ọ dị elu karịa ma banye n'etiti imi mmiri ọ na-anọdụ. Imecha / agba dị mma. Udo nke iji ihe dị mma ma dịkwa mfe. Aga m azụta ụlọ ọzọ maka ụlọ ịwụ ahụ ọzọ.
Nnọọ afọ ojuju na ngwaahịa a. Ọ dị mfe ịwụnye, nwere ọmarịcha ọhụụ nke oge a ma na-arụ ọrụ zuru oke ma ọ dịkarịa ala ugbu a. Nnukwu ngwaahịa maka ọnụahịa a.
Onwere obi uto na ogo nke oku mmiri na ịdị mfe nke nwụnye. Ihe niile dabara nke ọma na dochie nke ochie ahụ, tụmadị mgbe pipụ mmiri abụghị ọrụ kachasị amasị anyị. Nọmalị anyị kwesịrị ịme njem ọzọ iji nweta akụkụ. Nke a gara nke ọma.
Site na otu nke kacha mma fosets ego pụrụ ịzụta. Enwetara m nke a maka ọkara nke ihe ụlọ ahịa ngalaba chọrọ ma ọ dị ya mma ma dị mma karịa nke ha. Ga-azụta ọzọ
Ọ dị ezigbo mma na ngwaahịa siri ike. Ihe plọg ahụ buru ibu ma kpuchie olulu mmiri ahụ niile (ọ bụghị naanị ịbanye n'ime nsị ahụ).
Anyị nwere ezigbo mmasị na otu esi esi apụta mgbe etinyechara ya. Ngwaahịa ahụ dị mma nke ọma ma jikwa ya nke ọma. Ọ na-abịa na ihu ọma 2 iche iche iberibe: foset na ịlesụ, na igbapu akụkụ. Dị mfe ịghọta ihe na-aga ebe ịwụnye n'enweghị ntụziaka.
Ewuru ya karia plastik, ma sie ike nke oma ma di nma. M KWES recommendR recommend ịkwado ngwaahịa a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe gị RV ụlọ ịsa ahụ lavatory foset. M ga-ahọrọ a ika ọzọ mgbe ọ bụ oge dochie kichin imi foset enweghị ajụjụ.
V *** e2020-04-19
O siri ike nke ukwuu. Mfe & mfe iji wụnye. Ọ bụ ya mere m ji nweta mmadụ abụọ ka ha dochie m sinks. Don't naghị eche na ọnụahịa nke na-erughị $ 35. Chei, ọ bara uru nke ukwuu na ogo dị mma karịa $ 50 ma ọ bụ karịa nke m zụtara site na ụlọ ahịa dị na mpaghara (Home Depot, Lowes…)
Mfe iji wụnye na ihe efu ọhụrụ. Mmiri ahụ dị ukwuu! O were ihe dị ka nkeji 10 iji wụnye! Nke a na-arụ ọrụ nke ukwuu na ime ụlọ ịwụ ọbịa anyị. Anyị hụrụ atụmatụ ahụ na-enye anyị ohere ịchịkwa ọkụ na oyi n'otu oge ahụ. Ọ bịara na akụkụ niile na ntuziaka dị mfe
Nke a bụ ọmarịcha ọkpọ ọkpọ mara mma nke ọma. Ọ dị ka ọkpọkọ ama ama dị elu karịa aha, mana ọnụ ya dị mma n'okpuru na ọnụ ọgụgụ ezi uche dị na ya. Abịa na mma seramiiki seramiiki na-atụgharị na valves on / anya na a dime na-enweghị ntapu bụla. Enwere ihe etinyere na ikuku nke na-enye oke mmiri na-enweghị na-akpata ụda ma ọ bụ ụda olu. Nkpu nickel gwụchara na-aga nke ọma na sink m.
Ọ were m naanị 15 mins iji wụnye nke a na ihe efu ọhụrụ m. Ihe mgbapụta dị elu na-amasị m, nke dị mfe ịwụnye karịa nkwụsị elu. E ji ọla kọpa mee ka ọkpọkọ ọkpọkọ m wetara. Emere ya nke ọma ma sie ike, ọ ga-adịgide ogologo oge. Thegwọ ahụ dịkwa oke, kwa. Aga m azụta mmadụ abụọ ọzọ iji dochie anya ime ụlọ ịwụ ọzọ.
Ọ mara ezigbo mma, dị mfe ijikọ ọnụ ma ghara ịba ehi. Naanị okwu ịdọ aka ná ntị bụ na mmiri na-eji obere nrụgide apụta. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịgbanye isi ihe iji nweta ọtụtụ mmiri.
Nke a bụ maka ụlọ ịsa ahụ nna m ukwu, nke mbụ m na-eri oke, n'ihi ya, ekpebiri m ịnweta nke ọhụrụ nke nwere ezigbo mma. Yabụ m ga-enweta ụdị ọhụụ maka ime ụlọ ịwụ ahụ m. ọ dị mfe ịwụnye, ọmarịcha mma, ekwenyere m na ọ dị mma karịa ngwaahịa otu ọnụahịa na Lowe's ma ọ bụ Home Depot. Enyochawo m ụlọ ahịa abụọ ahụ, ihe mkpuchi ahụ dị oke ọnụ n'ebe ahụ, ihe ka ọtụtụ n'ime ha bụ ihe dị ka $ 70. WOW nwere otu ụdị na ụdị ọnụahịa ahụ na ụlọ ahịa abụọ ahụ.
M hụrụ n'anya nke a foset. Ọ dị mfe ịwụnye. Ọ dakọtara oche ndị dị na ime ụlọ ịwụ m nke ọma. Obi dị m ụtọ na m zụtara ya. Ọ dị oke ọnụ. Amaghị m nke ọma ogologo oge ọ ga-adịru mana ọ dị ka ọ nwere ike ịdị ogologo oge gafere.
Dị nnọọ mma mfe wụnye. Ezigbo mma. Naanị were m 10min ka ọ gbanwee ya. Mmiri na-apụta ngwa ngwa ma sie ike. N'ihi ya, kwesịrị ya.5stars
Ọ bụ ezigbo ihe. Igwe mmiri bụ maka ụlọ ịwụ ahụ dị n'okpuru ala. Enwere m oge iji wụnye nke ahụ taa. M hụrụ n'anya imewe banyere ọkpọkọ na ọ dị mfe iji wụnye. Obere obere mmechuihu ọ dị ntakịrị, ma eleghị anya ọ pụtara ogo dị elu.
Uru dị oke mma - ezigbo mma, ịdị mfe nke echichi, ịke, enwere m obi ụtọ na nzụta a. Ezigbo na elu mma foset.
Enwere m obi ụtọ, gburugburu, na ngwaahịa a site na ịzụta iji wụnye. Nke a bụ ibu uru na dị mfe iji wụnye. Ihe niile siri ike ma sie ike.
Na-arụ ọrụ maka ịsa ahụ ihe efu efu ngwa ngwa ụgbọ mmiri ga-azụta ọzọ
Nnukwu ihe. Dị mfe ịwụnye. Hụ na mmiri na-asọda mmiri mmiri. Nnọọ sleek.
Mfe echichi, adịghị melite n'oge na-adịghị, edo mmiri mkpụrụ, ọ bụ adaba iji na ọdịdị imewe bụ nnọọ siri, foset nnọọ mara mma mmetụta dị mma nke ukwuu, mmiri doro nnọọ anya, nwa ọhụrụ nwere ọtụtụ ụbọchị, n'ezie kwa ezi, iwepụ akụkụ niile bụ nnọọ adaba, na ọtụtụ ọhụrụ ihe
Igwe ọkpọ a dị mma maka ụlọ ịsa ahụ m. Ọ nwere aka ma dị mfe ịhụ ma ọ dị oyi ma ọ bụ ọkụ. Ọ dịkwa mfe iji na ezinụlọ m dum hụrụ ya n'anya.